Manandafy Rakotonirina : « Mihoa-pefy Ravalomanana » -
AccueilRaharaham-pirenenaManandafy Rakotonirina : « Mihoa-pefy Ravalomanana »
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny filoha nasionalin’ny antoko MFM, Manandafy Rakotonirina. Manoloana ny zava-nitranga tamin’ny fankalazana ny faha-15 taona nijoroan’ny antoko Tiako i Madagasikara na Tim, ny 8 jolay teo, ary niteraka fikorontanana sy savorovoro noho ny fitarihan’olona nidina an-dalambe, nambaran’ity filoha nasionalin’ny MFM ity fa “tsy azo ekena velively ireny nataon-dRavalomanana Marc ireny”.
Nanambara ny tenany fa “raha fankalazana fitsingerenan’ny taona niforonan’ny antoko, tsy tokony amin’ny alalan’ny fitarihana olona hidina an-dalambe no hanaovana izany. Fihoaram-pefy izany amiko ary rehefa mihoam-pefy, midika fandikan-dalàna ihany koa izany”.
Araka izany, tsy misy izay tsy nimenomenona tamin’ny nataon-dRavalomanana mivady sy ireo mpiara-dia aminy sy ny antoko Tim tamin’ny andron’ny asabotsy 8 jolay teo iny. Ny mpivarotra sy mpandraharaha ara-barotra maty antoka noho ny fikatonan’ny tsena, ny lalana tapaka, ny fifamoivoizana nikorontana tanteraka, ny filaminam-bahoaka tsy lazaina intsony.
Hita ary azo heverina avy hatrany fa mikasa ny hanongam-panjakana indray ingahy Ravalomanana ary nambarany rahateo izany vantany vao tafaverina an-tanindrazana izy amin’ny hoe “izaho tsy mahandry ny fifidianana 2018 izany”. Manaporofo tanteraka izany amin’ny fikasan-dratsy amin’ny fanonganam-panjakana sy hisian’ny rà mandriaka indray eto amin’ny firenena ary koa ny hanaovana sorona ny vahoaka, toy ny efa fanaony hatramin’ny niakarany teo amin’ny fitondrana sy nitondrany ny firenena. Zatra ny lalan-dririnina loatra ity Filoha teo aloha ity ary tsy manana finiavana amin’izany fampihavanana sy fihavanana izany mihitsy. Tsy mendrika ny hitantana firenena, mpamita-bahoaka ary efa zatra manao ampihi-mamba ny fananam-pirenena sy fananam-bahoaka, sns.
Mbola nohamafisin’i Manadafy Rakotonirina hatrany fa tsy dia voaporofo loatra ny herin-dRavalomanana sy ny mpanara-dia azy. Porofon’izany, hoy izy, ny fihorakorahan’ny olona azy tamin’ny fandalovany teny Soarano, ny andron’ny asabotsy 8 jolay.
Ankoatra izay, nitondra ny heviny kosa ity filoha nasionalin’ny MFM ity fa tokony hisy fanintsiana ny Lalàm-panorenana mba hisian’ny fitoniana maharitra eto amin’ny firenena ka tsy misy afaka manitsy izany afa-tsy ny Filoham-pirenena miaraka amin’ireo parlemanta roa tonta, Antenimieram-pirenena sy Antenimieran-doholona. Aminy, izay no mety hampisy fitoniana eto amintsika.
Milaza miara-mahita isika fa tao anatin’ny dimy taona monja no nampiroborobo ny harenan’i Mamy Ravatomanga. Villa Pradon, Azura Foulpointe sy Taolagnaro, fiaramanidina, villa sy “building” maro be ao Frantsa, kaonty manerana izao tontolo izao. Nivoaka ...Tohiny